Ku-Ota Ward Cultural Arts Paper "i-ART bee HIVE" ekhishwe yi-Ota Ward Cultural Promotion Association, intatheli yewadi "uMitsubachi Corps" izobhala ngemisebenzi yamasiko nobuciko!Sicela usithumelele izicelo zokusibekela noma imininingwane ngemisebenzi ehlobene namasiko nobuciko, njengemicimbi yobuciko, imisebenzi yokukhuthaza ubuciko, nezindawo zobuciko.
Ukukhishwa kwentwasahlobo: Ephreli XNUMX (Imininingwane ka-Ephreli-Juni)
Ukukhishwa kwehlobo: Julayi XNUMX (imininingwane kaJulayi-Septhemba)
Ukukhishwa kwekwindla: Okthoba 10 (Imininingwane ka-Okthoba-Disemba)
Ukukhishwa kobusika: Januwari XNUMX (imininingwane kaJanuwari-Mashi)
Umnqamulajuqu wezicelo zenhlolokhono nokunikezwa kolwazi
Udaba lwasentwasahlobo: maphakathi noJanuwari
Ukukhishwa kwehlobo: Maphakathi no-Ephreli
Ukukhishwa kwekwindla: Maphakathi noJulayi
Inkinga yasebusika: Maphakathi no-Okthoba
I-Ota Citizen's Plaza, i-Ota Citizen's Hall Aplico, i-Ota Bunkanomori Iwindi ngalinye
Ukuthumela kuzonqunywa ngemuva komhlangano wokuhlela.Ngokuya ngokuqukethwe nendawo, kungenzeka singakwazi ukushicilela.
Lokho okungaphazamisa isimo somphakathi kanye nesithunzi senhlangano
Ezombusazwe, imisebenzi yezenkolo, imibono nokwaziswa komuntu siqu
Noma yini ephambana nokuhleleka komphakathi kanye nemikhuba emihle
Amabhizinisi angaphansi koMthetho Wokulawulwa Kwebhizinisi Lamasiko, njll.
Izinto ezingavunyelwe ngumthetho noma ezingaphula umthetho
Ezinye ezaziwa njengezinenkinga ethile ekuzuzeni umphakathi
Imibuzo / Izethulo
146-0092-3 Shimomaruko, Ota-ku, Tokyo 1-3 Ngaphakathi e-Oza Citizen's Plaza
Ucingo: 03-3750-1611 IFEKSI: 03-3750-1150
Isicelo sokutholakala nokunikezwa kolwazi
Sizokuthinta kusuka kuleli kheli elingezansi.
Sicela usethe ikheli elilandelayo ukuthi litholakale kwikhompyutha yakho yangasese, iselula, njll., Faka imininingwane edingekayo, bese usebenzisa.
Isibonelo: Ota Taro
Ubudlelwano nokuqukethwe kwesicelo / kokuhlinzekwa※
Ubunikazi bakho Abahlanganyeli Izincwajana zemininingwane
Imisebenzi / imicimbi Umbukiso umsebenzi 施設 Izincwajana zemininingwane
* Amagama emicimbi, imibukiso eyedwa, njll.
Ikhasi eliyisiqalo noma i-URL yomthombo※
Izithombe noma amapheshana, njll.
Imininingwane yomuntu oyifakayo izosetshenziselwa kuphela izaziso ezimayelana ne-Ota Ward Cultural Arts Information Paper "ART BEE HIVE".